ရည်းစားဟောင်းက ချစ်သူသစ်ရနေကြောင်း သိလိုက်ရသောအခါ…… – Gentleman Magazine
ရည်းစားဟောင်းက ချစ်သူသစ်ရနေကြောင်း သိလိုက်ရသောအခါ……
နေ့စဉ်လုပ်နေကျ ထုံးစံအတိုင်း Facebook ကိုဖွင့်ပြီး ဘာတွေများထူးခြားတာရှိလဲကြည့်နေချိန်၊ People you may know နေရာမှာ ရည်းစားဟောင်းက နောက်တစ်ယောက်နဲ့တွဲရိုက်ထားတဲ့ Couple Photo လေးကို မြင်လိုက်ရရင် ဘယ်လိုဖြစ်သွားနိုင်ပါသလဲ။ ဟုတ်ပါတယ်။ သင်တို့ကြားမှာ ဘာဆက်ဆံရေးမှ မရှိတော့ဘူးဆိုပေမယ့်လည်း ရည်းစားဟောင်း ချစ်သူအသစ်ရသွားတာကို မြင်ရ သိရတာဟာ စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းလှပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လမ်းခွဲပြီး သိပ်မကြာသေးဘူးဆိုရင် ပိုဆိုးပါတယ်။ အခုတော့ ရည်းစားဟောင်းက နောက်တစ်ယောက်နဲ့အတူ ပြုံးပျော်ကြည်နူးနေပြီး ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာတောင် ဓာတ်ပုံတွေ တင်နေပြီဆိုတော့ ခံစားချက်က သိပ်ကောင်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီကြားထဲမှာ သင့်ရည်းစားဟောင်း အသစ်တစ်ယောက်နဲ့ တွဲနေပြီဆိုတာကို မြင်တဲ့သိတဲ့ အသိမိတ်ဆွေတွေက သင့်ကို သတင်းလှမ်းပေးကြပါဦးမယ်။ ဒါက အနာကို ဆားသိပ်လိုက်သလို ခံရခက်စေပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သင့်ကိုယ်သင် သံသယ၀င်လာပြီး ယုံကြည်မှုနည်းပါလာနိုင်ပါတယ်။ အဆိုးဆုံးအနေနဲ့ စိတ်ကျဝေဒနာကိုပါ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုကိစ္စတွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်မယ် နည်းလမ်းမရှိဘူးလား။ ရှိပါတယ်။
ရည်းစားဟောင်း အသစ်တွေ့တဲ့ကိစ္စကို ဘာဖြစ်လို့ လက်ခံနိုင်ဖို့ ခက်ခဲနေတာလဲ???
ရည်းစားဟောင်းအကြောင်းမတွေးပဲ၊ သူ့ဟာသူ ဘယ်သူနဲ့တွဲတွဲ ဂရုမစိုက်ပဲနေဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတိပေးတာ ဘယ်နှစ်ကြိမ်ရှိနေပြီလဲ။ ကျွန်တော်တို့အားလုံး ဒီလိုလုပ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း စိတ်ကူးထားတဲ့အတိုင်း မနေနိုင်ပဲ မနာလိုစိတ်က ၀င်လာတတ်ပါတယ်။ ရည်စားဟောင်းကို မေ့ပစ်ဖို့က ပြောတာထက် လုပ်ရတာက ခက်ပါတယ်။
လေ့လာမှုတွေအရ အသက်(၁၈)ကနေ (၃၅)နှစ်ကြား ယောင်္ကျားလေးတွေရဲ့ (၈၈)ရာခိုင်နှုန်းဟာ သူတို့ရည်းစားဟောင်းတွေရဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကို လိုက်ကြည့်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီထဲက (၈၀)ရာခိုင်နှုန်းက ရည်းစားဟောင်းရဲ့ ချစ်သူအသစ်ကိုပါ လိုက်ကြည့်တတ်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလို လိုက်ကြည့်တာများလေလေ၊ စိတ်ပျက်စရာပိုကောင်းလေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ပရိုဖိုင်တွေကို လိုက်ကြည့်ချင်စိတ်များနေပေမယ့် သွားကြည့်လိုက်တိုင်း နာကျင်ခံစားရမှာပါ။ ဒီလိုကနေ တဆင့် တစ်ဦးတည်းခွဲထွက်နေတတ်လာမယ်၊ အကူအညီမဲ့၊ တန်ဖိုးမဲ့သလို ခံစားရမယ်၊ အပြစ်ရှိသလိုဖြစ်ပြီး အာရုံစူးစိုက်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲလာမယ် စတဲ့ စိတ်ကျဝေဒနာရဲ့ ကနဦးလက္ခဏာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုမဖြစ်အောင် ရပ်တန့်ပြီး ရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့ ဘာလို့ ခက်ခဲနေရတာလဲ ????
ဒီနေရာ ပြဿနာဖြစ်ရတာက သင့်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာဦးခေတ်က အမျိုးသားတွေ၊ အမျိုးသမီးတွေလည်း ဒီလို ခံစားချက်မျိုး ရှိတတ်ကြပါတယ်။ သင်တို့နှစ်ဦးသား လမ်းခွဲပြတ်ဆဲပြီးပြီဆိုပေမယ့် သင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုလို့ ထင်မှတ်နေသေးတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ ကိုယ် ရှေ့မဆက်နိုင်ပဲ ရည်းစားဟောင်း အသစ်ရသွားတဲ့အပေါ်မှာပဲ ခံစားနေမယ်ဆိုရင် သင့်အတွက် ချစ်သူသစ်ရနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးရှိမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
သင့်ရည်စားဟောင်းကို ချစ်သူသစ်ရသွားပေမယ့် သင့်က မရသေးတဲ့အပေါ်မှာလည်း စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့လည်း ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ကိုယ် ရှေ့ဆက်ပြီး ချစ်သူသစ်နဲ့ ပျော်ရွှင်မှုအသစ်တွေ ရရှိဖို့ ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ချို့ကိုလည်း ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
ချစ်သူသစ်က အမြဲတမ်း သင့်ထက်ပိုကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိထားပါ။
သင့် ရည်းစားဟောင်း ချစ်သူသစ်ရသွားတာကို လက်မခံနိုင်ဖြစ်နေရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေထဲက တစ်ခုကတော့ သင့်ကောင်မလေးရဲ့ နောက်ရည်းစားက သင့်ထက်ပိုကောင်းတယ်လို့ ထင်နေတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအတွေးတွေကို ရှင်းထုတ်နိုင်ရင် ပြဿနာမရှိပါဘူး။ သင့်ရည်းစားဟောင်းရဲ့ ချစ်သူသစ်ကလည်း သင့်ထက်ပိုပြီး ကောင်းတာ၊ တော်တာ ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပါ။ မကောင်းတဲ့အတွေးတွေကို ဖျောက်ဖို့ကတော့ မလွယ်ကူပေမယ့် ပုံမှန်လေ့ကျင့်သွားမယ်ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ချစ်သူသစ်ရသွားတိုင်း အဟောင်းကို မေ့ပျောက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။
ချစ်သူသစ်၊ ရည်းစားသစ်ရသွားပြီဆိုတာနဲ့ သင်တို့နှစ်ဦးကြားက အရာအားလုံး ပျောက်ပျက်သွားပြီလို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ရည်းစားဟောင်းက နောက်တစ်ယောက်တွဲတာဟာ သင့်နေရာကို အစားထိုးတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ချစ်သူသစ်၊ ရည်းစားသစ်ရသွားတိုင်း အတိတ်က အရာအားလုံးကို ဖျောက်ဖျက်ပစ်လိုက်နိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်တို့ နှစ်ယောက်စလုံးမှာ တူညီတဲ့ အမှတ်တရတွေ၊ မှတ်ဥာဏ်တွေ ရှိနေနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီအချက်ကို မှတ်ထားပြီး အရမ်းခံစားမနေပဲ ရှေ့ဆက်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
ရည်းစားဟောင်းက အနိုင်ရသွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။
သင့်ရည်းစားဟောင်းက နောက်တစ်ယောက်အရင်ရသွားတဲ့အတွက် သင့်ကို အနိုင်ရသွားတယ်လို့ တွေးမိမှာပါ။ ဒီကိစ္စက အနိုင်အရှုံးတွေနဲ့ မပတ်သက်ပါဘူး။ နောက်ထပ်ချစ်သူသစ်တစ်ယောက် မြန်မြန်ရတယ် မရဘူးဆိုတာက သင့်အခြေအနေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လိုအပ်ချက်တွေပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ရည်းစားဟောင်း ချစ်သူသစ်ရသွားတိုင်း အရှုံးသမားဖြစ်သွားတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ နားလည်ဖို့ လိုပါတယ်။
ပျော်စရာကောင်းတယ် ၀ါသနာတစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ပါ။
သင့်မှာ အချိန်တွေပိုနေမယ်ဆိုရင် အတွေးမျိုးစုံကို တွေးပြီး မကောင်းတာတွေကိုပဲ စဉ်းစားမိနေမှာပါ။ ရည်းစားဟောင်းအကြောင်းတွေးမိနေရင် သင့်ကို ပိုပြီးဆိုးလာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ၀ါသနာပါတာ ဒါမှမဟုတ် စိတ်ဝင်စားတာ တစ်ခုခုကို လုပ်ဆောင်နေပါ။ ဒီလိုဆိုရင် သင့်ကိုယ်သင် ယုံကြည်မှုတိုးတက်လာနိုင်ပြီး စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းလာနိုင်ပါတယ်။ ရည်းစားဟောင်းနဲ့ သူ့ရဲ့ချစ်သူသစ်အကြောင်း သိပ်မတွေးမိတဲ့အတွက် စိတ်ခံစားမှုလည်း ပိုကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး အလုံးစုံကောင်းမွန်လာအောင် အချိန်ယူပါ။
ရည်းစားဟောင်းက အသစ်တွေ့သွားတဲ့အခါမှာ ဒီလောက်မြန်မြန် မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူးလို့ ယူဆထားတဲ့အတွက် စိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်တာဟာ လမ်းခွဲပြီး ဘယ်လောက်ကြာတာ၊ ဘယ်သူက စပြီးလမ်းခွဲတာတွေနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ တစ်ခါတစ်လေမှာ သင်က စပြီးလမ်းခွဲတဲ့သူဖြစ်ပေမယ့် ရည်းစားဟောင်း နောက်တစ်ယောက်ရသွားတာကို မကျေမနပ်ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ လမ်းခွဲပြီးသွားတဲ့ ရည်းစားဟောင်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လိုက်နှိုင်းယှဉ်ပြီး စိတ်ဆင်းရဲခံမနေပါနဲ့။ လူတွေက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အချိန်လိုအပ်မှုချင်း မတူညီကြပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ကိုယ်သင် အာရုံစိုက်ထားပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ အပြည့်အ၀ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီး နောက်ထပ် ချစ်သူသစ်တစ်ယောက်ထားဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အထိ စိတ်ရှည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရည်းစားဟောင်းကို မေ့ပစ်လိုက်ဖို့ဆိုတာ ကမ္ဘာမှာ မလွယ်ကူဆုံး ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ အချက်လေးတွေက တစ်နည်းနည်းနဲ့တော့ အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ရညျးစားဟောငျးက ခဈြသူသဈရနကွေောငျး သိလိုကျရသောအခါ……
နစေ့ဉျလုပျနကြေ ထုံးစံအတိုငျး Facebook ကိုဖှငျ့ပွီး ဘာတှမြေားထူးခွားတာရှိလဲကွညျ့နခြေိနျ၊ People you may know နရောမှာ ရညျးစားဟောငျးက နောကျတဈယောကျနဲ့တှဲရိုကျထားတဲ့ Couple Photo လေးကို မွငျလိုကျရရငျ ဘယျလိုဖွဈသှားနိုငျပါသလဲ။ ဟုတျပါတယျ။ သငျတို့ကွားမှာ ဘာဆကျဆံရေးမှ မရှိတော့ဘူးဆိုပမေယျ့လညျး ရညျးစားဟောငျး ခဈြသူအသဈရသှားတာကို မွငျရ သိရတာဟာ စိတျပကျြစရာ ကောငျးလှပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ လမျးခှဲပွီး သိပျမကွာသေးဘူးဆိုရငျ ပိုဆိုးပါတယျ။ အခုတော့ ရညျးစားဟောငျးက နောကျတဈယောကျနဲ့အတူ ပွုံးပြျောကွညျနူးနပွေီး ဆိုရှယျမီဒီယာပျေါမှာတောငျ ဓာတျပုံတှေ တငျနပွေီဆိုတော့ ခံစားခကျြက သိပျကောငျးမှာ မဟုတျပါဘူး။
ဒီကွားထဲမှာ သငျ့ရညျးစားဟောငျး အသဈတဈယောကျနဲ့ တှဲနပွေီဆိုတာကို မွငျတဲ့သိတဲ့ အသိမိတျဆှတှေကေ သငျ့ကို သတငျးလှမျးပေးကွပါဦးမယျ။ ဒါက အနာကို ဆားသိပျလိုကျသလို ခံရခကျစပေါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ သငျ့ကိုယျသငျ သံသယဝငျလာပွီး ယုံကွညျမှုနညျးပါလာနိုငျပါတယျ။ အဆိုးဆုံးအနနေဲ့ စိတျကဝြဒေနာကိုပါ ခံစားရနိုငျပါတယျ။ ဒီလိုကိစ်စတှကေို ကြျောဖွတျနိုငျမယျ နညျးလမျးမရှိဘူးလား။ ရှိပါတယျ။
ရညျးစားဟောငျး အသဈတှတေဲ့ကိစ်စကို ဘာဖွဈလို့ လကျခံနိုငျဖို့ ခကျခဲနတောလဲ???
ရညျးစားဟောငျးအကွောငျးမတှေးပဲ၊ သူ့ဟာသူ ဘယျသူနဲ့တှဲတှဲ ဂရုမစိုကျပဲနဖေို့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ သတိပေးတာ ဘယျနှဈကွိမျရှိနပွေီလဲ။ ကြှနျတျောတို့အားလုံး ဒီလိုလုပျကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး စိတျကူးထားတဲ့အတိုငျး မနနေိုငျပဲ မနာလိုစိတျက ၀ငျလာတတျပါတယျ။ ရညျစားဟောငျးကို မပေ့ဈဖို့က ပွောတာထကျ လုပျရတာက ခကျပါတယျ။
လလေ့ာမှုတှအေရ အသကျ(၁၈)ကနေ (၃၅)နှဈကွား ယောင်ျကြားလေးတှရေဲ့ (၈၈)ရာခိုငျနှုနျးဟာ သူတို့ရညျးစားဟောငျးတှရေဲ့ ဆိုရှယျမီဒီယာတှကေို လိုကျကွညျ့တတျကွပါတယျ။ ဒီထဲက (၈၀)ရာခိုငျနှုနျးက ရညျးစားဟောငျးရဲ့ ခဈြသူအသဈကိုပါ လိုကျကွညျ့တတျကွတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒီလို လိုကျကွညျ့တာမြားလလေေ၊ စိတျပကျြစရာပိုကောငျးလပေဲ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ ပရိုဖိုငျတှကေို လိုကျကွညျ့ခငျြစိတျမြားနပေမေယျ့ သှားကွညျ့လိုကျတိုငျး နာကငျြခံစားရမှာပါ။ ဒီလိုကနေ တဆငျ့ တဈဦးတညျးခှဲထှကျနတေတျလာမယျ၊ အကူအညီမဲ့၊ တနျဖိုးမဲ့သလို ခံစားရမယျ၊ အပွဈရှိသလိုဖွဈပွီး အာရုံစူးစိုကျနိုငျဖို့ ခကျခဲလာမယျ စတဲ့ စိတျကဝြဒေနာရဲ့ ကနဦးလက်ခဏာတှေ ဖွဈပျေါလာနိုငျပါတယျ။
ဒီလိုမဖွဈအောငျ ရပျတနျ့ပွီး ရှဆေ့ကျနိုငျဖို့ ဘာလို့ ခကျခဲနရေတာလဲ ????
ဒီနရော ပွဿနာဖွဈရတာက သငျ့ကွောငျ့မဟုတျပါဘူး။ ကမ်ဘာဦးခတျေက အမြိုးသားတှေ၊ အမြိုးသမီးတှလေညျး ဒီလို ခံစားခကျြမြိုး ရှိတတျကွပါတယျ။ သငျတို့နှဈဦးသား လမျးခှဲပွတျဆဲပွီးပွီဆိုပမေယျ့ သငျပိုငျဆိုငျတဲ့အရာတဈခုလို့ ထငျမှတျနသေေးတာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုအခြိနျမှာ ကိုယျ့ဘဝနဲ့ ကိုယျ ရှမေ့ဆကျနိုငျပဲ ရညျးစားဟောငျး အသဈရသှားတဲ့အပျေါမှာပဲ ခံစားနမေယျဆိုရငျ သငျ့အတှကျ ခဈြသူသဈရနိုငျဖို့ အခှငျ့အရေးရှိမှာ မဟုတျတော့ပါဘူး။
သငျ့ရညျစားဟောငျးကို ခဈြသူသဈရသှားပမေယျ့ သငျ့က မရသေးတဲ့အပျေါမှာလညျး စိတျဖိစီးမှုဖွဈနိုငျပါတယျ။ သငျ့အနနေဲ့လညျး ကိုယျ့ဘဝနဲ့ကိုယျ ရှဆေ့ကျပွီး ခဈြသူသဈနဲ့ ပြျောရှငျမှုအသဈတှေ ရရှိဖို့ ကွိုးစားရမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုလုပျနိုငျဖို့အတှကျ နညျးလမျးကောငျးတဈခြို့ကိုလညျး ဝမြှေပေးလိုကျပါတယျ။
ခဈြသူသဈက အမွဲတမျး သငျ့ထကျပိုကောငျးတာမဟုတျဘူးဆိုတာ သိထားပါ။
သငျ့ ရညျးစားဟောငျး ခဈြသူသဈရသှားတာကို လကျမခံနိုငျဖွဈနရေတဲ့ အကွောငျးရငျးတှထေဲက တဈခုကတော့ သငျ့ကောငျမလေးရဲ့ နောကျရညျးစားက သငျ့ထကျပိုကောငျးတယျလို့ ထငျနတောကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုအတှေးတှကေို ရှငျးထုတျနိုငျရငျ ပွဿနာမရှိပါဘူး။ သငျ့ရညျးစားဟောငျးရဲ့ ခဈြသူသဈကလညျး သငျ့ထကျပိုပွီး ကောငျးတာ၊ တျောတာ ဟုတျခငျြမှဟုတျမှာပါ။ မကောငျးတဲ့အတှေးတှကေို ဖြောကျဖို့ကတော့ မလှယျကူပမေယျ့ ပုံမှနျလကေ့ငျြ့သှားမယျဆိုရငျ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ခဈြသူသဈရသှားတိုငျး အဟောငျးကို မပြေ့ောကျသှားတာမဟုတျပါဘူး။
ခဈြသူသဈ၊ ရညျးစားသဈရသှားပွီဆိုတာနဲ့ သငျတို့နှဈဦးကွားက အရာအားလုံး ပြောကျပကျြသှားပွီလို့ ထငျတတျကွပါတယျ။ တကယျတော့ မဟုတျပါဘူး။ ရညျးစားဟောငျးက နောကျတဈယောကျတှဲတာဟာ သငျ့နရောကို အစားထိုးတာမဟုတျပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ ခဈြသူသဈ၊ ရညျးစားသဈရသှားတိုငျး အတိတျက အရာအားလုံးကို ဖြောကျဖကျြပဈလိုကျနိုငျတာ မဟုတျပါဘူး။ သငျ့တို့ နှဈယောကျစလုံးမှာ တူညီတဲ့ အမှတျတရတှေ၊ မှတျဉာဏျတှေ ရှိနနေိုငျပါသေးတယျ။ ဒီအခကျြကို မှတျထားပွီး အရမျးခံစားမနပေဲ ရှဆေ့ကျနိုငျအောငျ ကွိုးစားပါ။
ရညျးစားဟောငျးက အနိုငျရသှားတာ မဟုတျပါဘူး။
သငျ့ရညျးစားဟောငျးက နောကျတဈယောကျအရငျရသှားတဲ့အတှကျ သငျ့ကို အနိုငျရသှားတယျလို့ တှေးမိမှာပါ။ ဒီကိစ်စက အနိုငျအရှုံးတှနေဲ့ မပတျသကျပါဘူး။ နောကျထပျခဈြသူသဈတဈယောကျ မွနျမွနျရတယျ မရဘူးဆိုတာက သငျ့အခွအေနေ၊ ပတျဝနျးကငျြနဲ့ လိုအပျခကျြတှပေျေါမှာ မူတညျပါတယျ။ ရညျးစားဟောငျး ခဈြသူသဈရသှားတိုငျး အရှုံးသမားဖွဈသှားတာ မဟုတျဘူးဆိုတာ နားလညျဖို့ လိုပါတယျ။
ပြျောစရာကောငျးတယျ ၀ါသနာတဈခုကို လုပျဆောငျပါ။
သငျ့မှာ အခြိနျတှပေိုနမေယျဆိုရငျ အတှေးမြိုးစုံကို တှေးပွီး မကောငျးတာတှကေိုပဲ စဉျးစားမိနမှောပါ။ ရညျးစားဟောငျးအကွောငျးတှေးမိနရေငျ သငျ့ကို ပိုပွီးဆိုးလာစမှော ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ၀ါသနာပါတာ ဒါမှမဟုတျ စိတျဝငျစားတာ တဈခုခုကို လုပျဆောငျနပေါ။ ဒီလိုဆိုရငျ သငျ့ကိုယျသငျ ယုံကွညျမှုတိုးတကျလာနိုငျပွီး စိတျဖိစီးမှုလြော့နညျးလာနိုငျပါတယျ။ ရညျးစားဟောငျးနဲ့ သူ့ရဲ့ခဈြသူသဈအကွောငျး သိပျမတှေးမိတဲ့အတှကျ စိတျခံစားမှုလညျး ပိုကောငျးလာနိုငျပါတယျ။
စိတျရှညျရှညျထားပွီး အလုံးစုံကောငျးမှနျလာအောငျ အခြိနျယူပါ။
ရညျးစားဟောငျးက အသဈတှသှေ့ားတဲ့အခါမှာ ဒီလောကျမွနျမွနျ မဖွဈနိုငျလောကျဘူးလို့ ယူဆထားတဲ့အတှကျ စိတျဆငျးရဲရပါတယျ။ ဒီလိုဖွဈတာဟာ လမျးခှဲပွီး ဘယျလောကျကွာတာ၊ ဘယျသူက စပွီးလမျးခှဲတာတှနေဲ့ မဆိုငျပါဘူး။ တဈခါတဈလမှော သငျက စပွီးလမျးခှဲတဲ့သူဖွဈပမေယျ့ ရညျးစားဟောငျး နောကျတဈယောကျရသှားတာကို မကမြေနပျဖွဈနနေိုငျပါတယျ။ လမျးခှဲပွီးသှားတဲ့ ရညျးစားဟောငျးနဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ လိုကျနှိုငျးယှဉျပွီး စိတျဆငျးရဲခံမနပေါနဲ့။ လူတှကေ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အခြိနျလိုအပျမှုခငျြး မတူညီကွပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့ကိုယျသငျ အာရုံစိုကျထားပွီး ရုပျပိုငျးဆိုငျရာရော၊ စိတျပိုငျးဆိုငျရာပါ အပွညျ့အဝပွနျလညျကောငျးမှနျလာပွီး နောကျထပျ ခဈြသူသဈတဈယောကျထားဖို့ အဆငျသငျ့ဖွဈတဲ့အထိ စိတျရှညျရမှာဖွဈပါတယျ။
ရညျးစားဟောငျးကို မပေ့ဈလိုကျဖို့ဆိုတာ ကမ်ဘာမှာ မလှယျကူဆုံး ကိစ်စတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခုဖျောပွခဲ့တဲ့ အခကျြလေးတှကေ တဈနညျးနညျးနဲ့တော့ အထောကျအကူဖွဈမယျလို့ ထငျပါတယျ။
Previous: စိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်နေသူတစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲ ???
Next: ဘ၀ ရည်ရွယ်ချက် အစစ်အမှန်ကို တွေ့ရှိနိုင်ဖို့ နည်းလမ်း(၅)ခု